Ziziphi iimpawu eziphambili ze-Amazon ezikhethiweyo ezaziwa ngabo bonke abathengisayo apho?
Ngokucacileyo, ama-keywords e-Amazon ngokwawo ahlala ahlobo olufanayo lwezicelo zokukhangela ezizaliswe ngabasebenzisi abajikelezayo kwi-bar yokukhangela ye-Google. Ngenxa yoko, baya kubona amaphepha ahlukeneyo okanye iziphumo zoluhlu oluhambelana nokufaka umbuzo othile wokukhangela. Kwaye ukubaluleka kokusingatha uphando lwegama eliphambili sele lisaziwa kakhulu ngabaninzi be-webmasters kunye nabasomashishini be-intanethi, ubuncinci abo baqhuba izitolo zokuthumela izinto zokuhambisa izinto ezihamba nge-ecommerce, okanye ngokomzekelo abakhi bee-site. Akunakutsho ukuba mhlawumbi zonke i-SEOs ezifanelekileyo zivele zithathile ngokuthe xaxa - umxholo uhlale ukosi, xa kuziwa ekuphuculeni ukukhangela. Kwaye ukukhetha ngokufanelekileyo amagama angundoqo, ukudibanisa nokusetyenziswa kwawo okuxhomekeke kumthungelwano okwenza ukuba uphumelele mhlawumbi yonke iprojekthi ye-intanethi yangoku, ngaphandle kokungabikho. Yingakho ndifanele ndivumelane nalabo bathengisi bethetha ukuba xa kuziwa kuma-keywords e-Amazon, uphando olunzulu oluqhelekileyo ludla i-80% ebambe iqhaza kwimigudu yabo yehlabathi, ngelixa umsebenzi wabo wonke usele phantse kwi-20%.
Iyona nto ibaluleke kakhulu kwaye ixabisekileyo i-Amazon iinqununu
Kuthathwa ngokubanzi, amagama angundoqo egolide ayenzelwe ukuba phakathi kwezinto ezixabisekileyo ezifunyenwe kwi-arsenal yazo yonke i-ecommerce ephumelelayo. umthengisi. Ngokuqinisekileyo, kunikezelwa ukuba abo basomashishini be-intanethi bahlakaniphile ngokwaneleyo ukuba baqaphele kanye kunye nabo bonke - amagama abalulekileyo egolide awona nto aqhuba ngayo ukuguqulwa kwawo okuphezulu. Ekugqibeleni, la magama angundoqo kulindeleke ukuba enze imali emva kwayo yonke into. Nantsi into omele uyazi malunga neempawu ezine eziphambili.
Iinqununu ezine eziphambili ze-Amazon Golden Key
Ngamanye amazwi, amagama akwii-golden ayenzelwe ukuba akwazi ukulawula umthamo okwaneleyo wendlela yokukhangela kwiintengiso zakho. Qaphela, nangona kunjalo, amagama anjalo afunekayo kufuneka abe nezinga elifanelekileyo elincomekayo lokukhuphisana - ukuze wenze ukuba ukwazi ukulubala ngokukhululekile. Ngakolunye uhlangothi, igama ngalinye legama legolide kufuneka libe nesimo esomeleleyo soshishino ukwenzela ukuba ininzi yabathengi abangatshitshisiweyo bachithe imali ekupheleni kohambo lwabo ukuba babe ngabathengi bokwenene.
I-Volume Search - inokufunyanwa nelo lilungelo elidala leGoogle yegama elingundoqo. Esi sixhobo mhlawumbi sisona sikhewu esilula ukuqala ukuphanda ama-Amazon amagama angcono kunokwenzeka.
Ukuhlaziywa koPhuculo kufuneka kulandelwe ngokwengxenye, ngelixa amaqhankqalazi akho anokuhlolisiswa kunye nezikhokelo ze-intanethi zezixhobo ze-software ezifana ne-Long Tail Pro, i-Keyword Merchant, okanye i-Jungle Scout. Bonke bakulungele ukukunceda ngomsebenzi. Ngoko ke, kukuphela kwakho ukuba ngubani ozakuzama kuqala.
Iinjongo zophando - kuthetha ukuba i-volume search search key words sometimes by weighting more weighting, ngoko ke inokuba namandla ngakumbi ngokwemali yokufumana inzuzo, kunokuba nayiphi na amanye amagama angundoqo ama-Amazon.
Imiqathango yokulungele ukuthenga - idla ngokusetyenziswa ngabathengi abanokuthi basondele kwisigqibo sabo sokugqibela sokuthenga. Umzekelo, phambi kokushiya into ekhethiweyo enqwelweni, ininzi kuthi ngamanye amaxesha siyihlola kwakhona, ngeli xesha lidibanisa nesicelo sophendlo sangaphambili kunye nezinye zezimilo zokuthenga ezilungeleyo "njengezona zinto zilungileyo", "ziphakanyisiwe", " umgangatho "," ndingayithenga phi "," ulungelelanise ", njl